धादिङमा तीन जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि ! – Khabar Silo
धादिङमा तीन जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि !
Posted on May 19, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना विस्तारै नयाँ जिल्लाहरुमा फैलन थालेको छ । मंगलवार धादिगंमा ३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु फरक फरक गाउँपालिकाका हुन् । नेत्रावती डब्जोङ्ग गाउँपालिकामा, गल्छी गाउँपालिका र थाँक्रे गाउँपालिकामा १, १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । धादिङ जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख भुवन पौडेलले सो कुरा पुष्टि गरेका छन् । यस अघि थादिगंमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनी थाक्रे गाउँपालिकाका हुन् । उनको सम्पर्कमा रहेकाहरुको प्रारम्भिक जाँ पछि अन्यको पनि जाँच गरिएको हो । थाक्रेका ४१ वर्षमा पुरुष काठमाडौं बस्दै आएका थिए । धादिङ्गबाट काठमाडौं आफ्नो कोठामा गएका उनलाई घरभेटीले घरमा पस्न नदिएपछि उनी टेकुमा कोरोना परिक्षण गर्न गएका थिए ।
काठमाडौंको टेकु अस्पतालमा गएर पिसिआर प्रविधिवाट कोरोना जाँच गार्द उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो । उनी काठमाडौंको बागबजारमा प्रिन्टिङ्ग प्रेस सञ्चालन गर्दै आएका छन् । लकडाउनकै क्रममा घर आएर फेरी काठमाडौं फर्किएका उनमा कोरोना पुष्टि भएपछि संक्रमित एरिया पुर्वमा कृष्ण मन्दिर पश्चिममा ८ किला उत्तरमा महेशखोला सिल गरेको र संक्रमित एरियामा ५ जना परिवार ५ जना स्थानीयको पहिलो चरण र्‍यापिड टेस्ट गरिने धादिङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तमाङ्गले बताएका छन् ।
त्यस्तै मंगलवार प्रदेश १ मा थप ११ जना कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित थपिएका छन् । बाँकेमा सोमवार मात्र निकै धेरै कोरोना पुष्टि भएको थियो । एकै दिन बाँकेमा ६८ जनामा कोरोना देखिएको भोलीपल्ट फेरी तराईका जिल्लामा मंगलवार विहानै देखि कोरोना संक्रमितको डाटा आउन थालेको छ ।
मंगलवार विहान झापाका ९ र सुनसरीका २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । झापाका ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको कोशी अस्पतालले पुष्टि गरेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा संगीता मिश्राले ११ जनाको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको पुष्टि गरेकी हुन् ।
झापाको केचनकवल गाउँपालिकाका रहेको पनि उनले बताएकी छन् । सोमवार पनि सोही ठाउँका एक युवकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । सोही युवकसंगको सम्पर्कमा रहेकाहरुको गरिएको पिसिआर परिक्षणका क्रममा अरुको पनि पोजेटिभ आएको हो । युवकको टोलका ३३ जनाको कोशी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो ।
त्यस्तै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा पनि सुनसरीका दुईजनामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको छ । कोरोना पोजेटिभ देखिनेमा इटहरीका १८ वर्षका युवक र अर्का व्यक्ति सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी रहेको बताईको छ । योसँगै सुनसरीमा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या तीन र झापामा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ पुगेको छ ।
शिल्पा पोखरेललाई प्रकाश सुवेदीको उल्टै चुनौती, थप यस्ता प्रमाण हामीसंग छन् ५ गते पछि देखाउँछु (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on April 17, 2021 Author khabar silo
काठमाडौ । आफ्ना बारेमा अनावश्यक टिप्पणी गरेर वे इ ज्ज त गरेको भन्दै नायकीका शिल्पा पोखरेलले प्रहरी लगायत विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिएपछि रजतपटका कार्यक्रम संचालक प्रकाश सुवेदीले फेरी पनि शिल्पाकै बारेमा कार्यक्रम बनाएका छन् । उनले शिल्पालाई ठाडो चुनौती दिँदै आफु प्रमाणका आधारमा मात्र बोलेको र कुनै कुरा पनि कपोकल्पित नभएको दावी गरेका छन् । […]
गृहपृष्ठ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो, अब कुन इन्धनको मूल्य कति ?
Posted on July 21, 2021 July 21, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले ग्यासमा २५ रुपैयाँ र डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धमा सबैमा दुई दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको हो । मूल्यवृद्धिसँगै काठमाडौंमा पेट्रोल लिटरको १२९, डिजेल र मट्टितेल ११२ रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ह्वाइ इन्धनतर्फ ८४ प्रतिलिटर, […]
वीरगञ्जमा कोरोनाबाट थप दुई जनाको मृत्यु
Posted on September 1, 2020 Author khabar silo
१६ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बाराको कोल्हबी नगरपालिकाका ६० वर्षीय पुरुष र पहिचान नखुलेको अन्दाजी ६० वर्षकै पुरुषको मृत्यु भएको हो । बाराका पुरुषको गण्डक कोभिड अस्पतालमा र ठेगाना नखुलेका अर्का व्यक्तिको नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता बरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्टर अतुलेश चौरसियाले जानकारी […]
कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण सफल भयो : अमेरिकी कम्पनी
भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचाररत गुल्मीका संक्रमितको पुनः कोरोना परीक्षण गरिने